7Day TV is an online media platform, presented by 7Day Digital,asibling media unit of 7Day News Journal and 7Day News Newspaper, in Myanmar.
ဖာပွန်က စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး လူထုဆန္ဒပြပွဲ ကေအန်ယူလာရောက်ဝန်းရံ
ဒေါက်တာဆာဆာနဲ့ ကေအန်ယူ ဘာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့သလဲ
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ ဒီချုပ်ပါတီဝင်အချို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို စာပို့မယ်
အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) နဲ့ဖမ်းဆီးထား
CDM မှာပါတဲ့အပြင် လှုံဆော်မှုတွေလုပ်တယ်ဆိုကာ နေပြည်တော်မှာ ၁၂ ဦးကိုတရားစွဲဆို
မနက်ခင်းနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်း-Morning International News
မြန်မာ စစ်တပ်အပေါ် အမေရိကန်ရဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုတွေ ပိုမိုတင်းကျပ်
သေနတ်သုံးချက်ပစ်တာ ဒုတိယအချက်မှာမှန်ပြီး ကျသွားတာ
မြောက်ဥက္ကလာမှာ ကျဆုံးခဲ့သူတွေထဲက ၃ ဦးရဲ့ နာရေး
ရဲနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ ဖြိုခွင်းမှုတွေအပေါ် ICRC တိုက်တွန်းချက်ထုတ်ပြန်
မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကရပ်တည်ကြောင်း ပြင်သစ်သမ္မတ ပြောကြား
စစ်ရေးအရ စွက်ဖက်မှု မူဝါဒမျိုးကို ဦးစားပေးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးပြော
CDM မှာ ပါဝင်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ ဦးကို စောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ ကေအန်ယူဒူးပလာယာခရိုင်ထုတ်ပြန်
ကော့ကရိတ်သပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုမယ့်အဖွဲ့ထဲမှာ BGF ဘက်တံဆိပ်တပ်ထားသူတွေပါနေတယ်လို့ဆို
ကျောက်မြောင်းက ရပ်ကွက်တွေထဲ တစ်နာရီခွဲကျော်ကြာ ပစ်ခတ်မှုတွေဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့
ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ပရဟိတအသင်းက လူငယ်တွေ အင်းစိန်ထောင်မှာရှိနေ
ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် ကျဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပေမယ့် ဆန္ဒပြမှုတွေအရှိန်မပျက်ရှိနေ
မနေ့က တရက်တည်းမှာတင် လူ ၃၈ ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြော
နေအိမ်တွေထဲထိဝင်ဆွဲ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေ အဆက်သွယ်မရသေး
ဦးခေါင်းသေနတ်ကျည်ထိမှန်ပြီး သေဆုံးခဲ့တဲ့ မကြယ်စင်ရဲ့နာရေးအခမ်းအနား
နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်း-Daily International News
ပစ်ခတ်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ၁၅ ဦးထက်မနည်းသေဆုံး
Hia Moe7นาทีที่ผ่านมา
Recome Girl 10 นาทีที่ผ่านมา
Myo Myosss 12 นาทีที่ผ่านมา
Pyone Pyone 12 นาทีที่ผ่านมา
sai sai 13 นาทีที่ผ่านมา
ေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ာ ပါဝင္သူေတြကို ေထာက္ပ့ံေပးျကပါ လုံျခံဳေအာင္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျကပါ
star star 14 นาทีที่ผ่านมา
sai sai 19 นาทีที่ผ่านมา
ေလးစားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ အျခားလက္နက္ကိုင္မ်ားလည္းျပည္သူ႔ ဘက္ကေထာက္ခံေပးျကပါ
aiyeka and riley manlino family 20 นาทีที่ผ่านมา
Keep safe Myanmar Save Myanmar
Htet Min Myat 24 นาทีที่ผ่านมา
Win Tun 32 นาทีที่ผ่านมา
V-partner Soe Paing 34 นาทีที่ผ่านมา
တိုင်းရင်းသားများရော ပြည်သူ့ဘက်မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပေးတဲ့ KNU အဖွဲ့စည်းကိုရော အဲ့သလိုစည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ မြင်ရကြားရတာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်မနည်းထိန်းထားနေရတယ်
kyaw Thu 41 นาทีที่ผ่านมา
Phyu Min 42 นาทีที่ผ่านมา
proud of you and your famiy! fightingtogether our country !
Tsawra Namatu 43 นาทีที่ผ่านมา
KNU ဆို အသေကြောက်ငါလိုးမမင်းအောင်လှိုင်😁
U Kwar 44 นาทีที่ผ่านมา
Ko Hein 47 นาทีที่ผ่านมา
အမဖင္လိုးခ်င္လို႔. ၾကည့္ရင္း လီးေတာင္လာလို႔
Hay mam 47 นาทีที่ผ่านมา
mg myint 52 นาทีที่ผ่านมา
Return our Elected Government.
mg myint 53 นาทีที่ผ่านมา
We don't accept military coup in myanmar, help us urgently from the World.
เล็ก สมชัย 53 นาทีที่ผ่านมา
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ မင်းတိုအခုမှအိပ်ရာကနေ နိုးလာတာ ယခုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေကို မင်းတို့ဖိအားကြောင့်လဲပါတယ်ဆိုတာ မင်းတို့မမေ့နဲ့ မင်းတို့အဖေအမေသင်ထားတဲ့ပညာတွေကို အလကာဖြစ်ကုန်ပီးသိလာ စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ညာဏ်မသုံးပဲနဲ့လက်ခံလိုက်တာကို တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ် စစ်တပ်က #အများအကျိုးဘယ်တုန်းကလုပ်ဖူးလို့လဲ #ကတိဘယ်တုန်းကတည်ဖူးလို့လဲ # #နောက်ထပ်လဲ ပြည်သူကိုလိုလားနေတဲ ဒီမိုကရေစီအစစ်လို့ ရမယ်လို့မင်းတို့ထင်နေလာ အိမ်မက်တွေထပ်မက်လိုက်အုံး# #စဥ်းစားပါ ပညာတတ်တယ်ဟုတ်လာ တချို့က ဒေါ်စုကိုလဲအရမ်မုန်းနေကြတဲ့လူတွေ တကယ်ပညာမတတ်တဲ့လူပဲ ပြည်သူအတွက်ဆို အကုန်လုံးဆုတ်ပြတ်သတ်အောင်ပေးလိုက်လို့ ဘာမှကို မကျန်တော့ဘူး ဒါကိုတောင်မင်းတို့မမြင်သေးဘူးလား မင်းတို့ပညာတတ်ပြီးတော့ စာရောဖတ်ရဲ့လာ ဒေါ်စုအကြောင်းတွေ ငါလဲမွန်ပဲ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာကိုပြောတယ် နောက်မှဆက်ပြောမယ်
sannyu maw 59 นาทีที่ผ่านมา
We love knu🥰🥰
MINN & SETH gaming channel ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hlaingmin Minhtwe ชั่วโมงที่ผ่านมา
hlatay nor ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thanks for KNU
JadeLand Duwa ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဗိုရှုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သူ့သမ္မီးအင်္ဂလန်သူမိုက်ကယ်စုကြည်ကလိမ်ကကျစ်တစိတ်ထဲတပုံစံထဲဘဲ ဗိုရှုပ်လဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုအိမ်ဖေါ်လိုဘဲသဘောထား၊ဗမာတွေချည်းအင်္ဂလန်ခိုးသွားပြီးတနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်ရေးအတူယူဖို့သွားပြော၊မရမှရှက်ရှက်နဲ့ပြန်လာပြီးတိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်ဖို့အောင့်သက်သက်နဲ့လာပြော အခုလဲမိုက်ကယ်စုကြည်ရဲ့ဗမာcrph ကUNကိုလူမျိုးစုတွေကိုအရေးမစိုက်ဘဲတကိုယ်တော်သွားလုပ်၊ အခြေအနေမဟန်လာမှမျက်လှည့်ပြ၊သဘောထားကြီးဟန်ဆောင်စာပြင်ပြောင်းထုတ်တယ်၊ ဒါတောင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဗမာတွေကြားအရေးအကြီးဆုံးပင်လုံစာချုပ်ကိုရူးခြင်ယောင်ဆောင်ပြီးချန်ထားသေးတယ် လူရိုးတိုင်းရင်းသားတချို့ကတော့ဝမ်းသာအားရပေါ့၊အမှတ်မရှိအိမ်ရှင်ဗမာတွေသူတို့နဲ့ထမင်းတဝိုင်းထဲထိုင်စားဖို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီး၊ အမှီးတနံ့နံ့နဲ့ပေါ့ကွယ်၊
Nan Oo 25 นาทีที่ผ่านมา
လူရုတ်မာ ခင်များ ပိုစ့်တိုင်းမှာ ဟိုဘက်လိုလို ဒီဘက်လိုလို ဝင်ရှုပ်နေတာကြာပြီ မပြောချင်လို့ကြည့်နေတာကြာပြီ
power nine 50 นาทีที่ผ่านมา
Sakorn Heebkaew ชั่วโมงที่ผ่านมา
I really hate hungry in power mad dog.Min Aung.
I really hate bad myanmar military.
Don't hurt innocent people, bad military.
We cry with you myanmar people.
Evil Min Aung Hliang, stop your bad action against innocent people.
Chitgyi Thuခ်စ္လြန္းလိုအလိုခဲ့တယ့္ ชั่วโมงที่ผ่านมา
KNU ထာဝရလေးစာနေပါတယ် အဖွဲးမှာလဲ တာဝန်ထန်ဆောင်ချင်တယ်
Htet Lwin ชั่วโมงที่ผ่านมา
Mama Moe ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thank you, KNU for protecting people and standing against the military government. Stay safe!
Wai Wai ชั่วโมงที่ผ่านมา
min mahar ชั่วโมงที่ผ่านมา
N P W ###### ชั่วโมงที่ผ่านมา
good. K. N. U
Thaw Dar Win ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hla tun ชั่วโมงที่ผ่านมา
Cj Ch ชั่วโมงที่ผ่านมา
Chu Chu ชั่วโมงที่ผ่านมา
May Buddha save you all good soldiers.
sanay linn ชั่วโมงที่ผ่านมา
KNU တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး ဘေးကင်းကျန်းမာ၊ အောင်မြင်ကြပါစေ။ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။
ma ma ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thank you very much good soldiers.
Chow Ma ชั่วโมงที่ผ่านมา
CONDEMNED the Myanmar army and police for using real bullets, in handling demonstrations
Gmail Gmail ชั่วโมงที่ผ่านมา
Aye Mar ชั่วโมงที่ผ่านมา
Wi la Ume ชั่วโมงที่ผ่านมา
ထောက်ခံပါတယ်.. အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Yupar Yupar ชั่วโมงที่ผ่านมา
shine wanna aung ชั่วโมงที่ผ่านมา
7 days အနေနဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ သတင်းမီဒီယာဥပဒေကြားထဲ တော်တော်ကြိုးစားနေပါတယ် အမြဲအားပေးနေပါတယ် #အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
zaw minhtay ชั่วโมงที่ผ่านมา
Saw Aung2ชั่วโมงที่ผ่านมา
루큐2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Saint Desilver2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Soethiri may2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thet Shine2ชั่วโมงที่ผ่านมา
Play Google2ชั่วโมงที่ผ่านมา
The same soldiers who attacked the Rohingyas.
Lily Say3ชั่วโมงที่ผ่านมา
I'm karen people too i grow up in refugee camp because i know about my karen people how did they feel they 're so poor they feel 70 th they didn't have education but other people said our karen people are fake😂😂 they don't know this feelings and they said sometime i pray for my karen people they will get peace we need peace please save people life too😢😢when i saw people are die i'm really sad i believe leaders from KNU please help and save people God will bless our myanmar people
Hser Gay Soe3ชั่วโมงที่ผ่านมา
Phaw Thit3ชั่วโมงที่ผ่านมา
BGF​ေတြက ငါတို႔ကရင္​​ေတြကို သစၥာ​ေဖာက္​တယ္​ အလိုမ႐ွိဘူး ​ေခြးမသား BGF​ေတြ
Saydo do4ชั่วโมงที่ผ่านมา
Don't talking about another country problem.
JadeLand Duwa 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဗိုရှုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သူ့သမ္မီးအင်္ဂလန်သူမိုက်ကယ်စုကြည်ကလိမ်ကကျစ်တစိတ်ထဲတပုံစံထဲဘဲ ဗိုရှုပ်လဲတိုင်းရင်းသားတွေကိုအိမ်ဖေါ်လိုဘဲသဘောထား၊ဗမာတွေချည်းအင်္ဂလန်ခိုးသွားပြီးတနိုင်ငံလုံးလွတ်လပ်ရေးအတူယူဖို့သွားပြော၊မရမှရှက်ရှက်နဲ့ပြန်လာပြီးတိုင်းရင်းသားတွေပါဝင်ဖို့အောင့်သက်သက်နဲ့လာပြော အခုလဲမိုက်ကယ်စုကြည်ရဲ့ဗမာcrph ကUNကိုလူမျိုးစုတွေကိုအရေးမစိုက်ဘဲတကိုယ်တော်သွားလုပ်၊ အခြေအနေမဟန်လာမှမျက်လှည့်ပြ၊သဘောထားကြီးဟန်ဆောင်စာပြင်ပြောင်းထုတ်တယ်၊ ဒါတောင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဗမာတွေကြားအရေးအကြီးဆုံးပင်လုံစာချုပ်ကိုရူးခြင်ယောင်ဆောင်ပြီးချန်ထားသေးတယ် လူရိုးတိုင်းရင်းသားတချို့ကတော့ဝမ်းသာအားရပေါ့၊အမှတ်မရှိအိမ်ရှင်ဗမာတွေသူတို့နဲ့ထမင်းတဝိုင်းထဲထိုင်စားဖို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီး၊ အမှီးတနံ့နံ့နဲ့ပေါ့ကွယ်၊။၊
Galaxy Dust 47 นาทีที่ผ่านมา
ဖျက်ဆီးသူ။ ဒီမိုကရေစီမရှိရင်လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာခင်ဗျားသဘောပေါက်ရဲ့လား။ဤအချိန်သည်စည်းလုံးရန်အချိန်ဖြစ်သည်။နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစဉ်းစားပါ။ အပြုသဘောရှိပါ။ မဖျက်ပါနဲ့။ ဘုံရန်သူကားအဘယ်သူနည်း။ မမေ့ပါနှင့်။ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်မည့်အစား .offer အကူအညီ။ ဒါဟာငါတို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။
Saint Desilver ชั่วโมงที่ผ่านมา
Saw Lah 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Burma detatorship Mai Aung Hlaing near Sunset 🌇
myo zaw9ชั่วโมงที่ผ่านมา
မဲမခိုးတာပဲစြတ္စြဲေတာ့ခံရတာပဲလား ကြၽန္ေတာ္ကတကယ္ခိုးလို႔ထင္ေနတာ အဲ့တာဗ်ာရွင္းၾကပါလား မဲရံုကလူေတြ ဘာလို႔မခိုးတဲ့အေၾကာင္းမေျပာရဲရတာလဲ အခုေတာ့ျမင္ေကာင္းၾကလား မဲစစ္တဲ့ဌာန ဘာလို႔မရွင္းျပတာလဲ ငါေတာ္ေတာ္စိတ္တိုတယ္
Moe Moe 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Machawii Fanai 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
အာယု ထိုင္း 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Awlay Sawpa Mughapoe 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Thant Zin ေအာင္ျမင္ပါေစ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဦးေအာင္ကိုဖမ္းတာ ေငြညွစ္ခ်င္လို႕ ေငြညွစ္ခ်င္လို႕ ျပႆနာရွာတာဘဲး
myat min 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
အပြစ်ရှိလို့ဖမ်းထားတာ ပြည်သူလူထုအပေါ်ကလိမ်ကကျစ်လုပ်လို့ပေါ့ အလကားပါးစပ်ကပြည်သူအတွက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ အခုတော့တကယ်လည်းစစ်ဆေးတော့မှ မေတ္တာခံယူနေကြတာ ကံကောင်တယ်သိလား ဟစ်တလာနဲ့တွေ့ရင် အခုချိန်ဆိုငရဲမှာအဝီစီမှာဂျိုးကပ်နေပြီ ကံကောင်းတယ်သိလား ကောင်းပြီး..ကောင်ပြီ...ဂေါင်းကြီးတို့ဘုရားရှိခိုးကြပေါ့ကွာ
Thomas kukumuda 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
A federal constitution for Myanmar A federal constitution for Myanmar A federal constitution for Myanmar
Christ So 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Main aung Lang is Myanmar people god now. Better try to protect now we don’t need dictator
Myat Myat Soe 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
khin moe 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ဓါးျမတုိက္ေနပါပီေနာ္သူပုန္ေတြက အရာရွိေခါင္းေဆာင္နဲ႔ေငြေျကးရိွတဲ႔သူေတြမ်ားပါတယ္မသင္ကာဘူးဘာဆုိင္လုိလဲ အာဏာရွူးအာဏာလုမကအားလုံးလုေနတာသတ္ေနတာအဲတာလူမဟုတ္ဘူးမအလ နားလည္ပါ အစြန္းေရာက္ေနပီေနာ္ ေနာင္မွအမေလးေျကာက္ပါပီမလုပ္နဲ႔ ဖမ္းဆီးထားတဲ႔ေနရာမွာမအလေနျကည႔္လုိက္စမ္းခန ကုိယ္ျခင္းစာပါ မိန္းမရွိတယ္သားေတြသၼီးေတြေျမးေတြေဆြမ်ိဳးဆုိရင္ခံနုိင္ပါ႔မလားမအလေရ မတရား မလုပ္ပါနဲ႔ ရပ္သင္႔ေနပီ ရွက္စရာျကီး ကုိယ္ျခင္းစာပါ
phone Myint 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
လူသတ်ရင်ရာထူးတိုး ဆုငွေလည်းရကြတော့ အပျော်သဘောမျိုးတောင်လုပ်နေကြတာ ခါးပိုက်ဆောင်တပ်တွေပါ